ढिलो आयो कडा आयो : अन्त्यमा होन्डाको फेस्टिभ अफर, यो भन्दा पहिले अन्य कम्पनी - Nepal Auto
ढिलो आयो कडा आयो : अन्त्यमा होन्डाको फेस्टिभ अफर, यो भन्दा पहिले अन्य कम्पनी
चाडपर्ब नजिकिएसँगै अहिले विभिन्न अटोमोबाइल कम्पनीहरुले धमाधम स्किम तथा अफर सार्वजनिक गरिरहेका छन् । टु ह्विलरमा सबैभन्दा पहिले बजाजले यस्तो अफर सार्वजनिक गरे लगत्तै यामाहा, टीभीएस, हिरो र सुजुकीले फेस्टिभल अफर सार्बजनिक गरिसकेका छन् । त्यसैगरी पछिल्लो समयमा नेपाली बजारमा भित्रिएका मोटरहेड, बेनेली आदि ब्रान्ड समेत यसमा जोडिएका छन् ।
फेस्टिभलको यस्तो माहोलमा होन्डाले सबैभन्दा पछि हालै अफर सार्वजनिक गरेको छ । होन्डाले तीज विशेष अफर भनेर भदौ २० देखि २५ सम्मका लागि मोटरसाइकल तथा स्कुटर खरिदमा ४ हजार ५ सय रुपैयाँ क्यास ब्याक अफर ल्याएको थियो । २५ गते उक्त अफर सकिएपछि बल्ल नयाँ अफर कम्पनीले सार्वजनिक गरेको हो ।
बजारमा कारोबार हुने प्रमुख ५ प्रतिस्पर्धि ब्रान्डले दमदार अफर सार्वजनिक गर्दा समेत होन्डा भने तीज अफरमै अल्झिएर बसेको गुनासो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एकजना डिलरले गरे । यसले गर्दा यो सिजनमा होन्डाको कारोबार प्रभाबित बन्न सक्ने उनको आशंका थियो । बजारमा फेस्टिभल माहोल बनिसकेको बताउँदै उनले भने, ‘ग्राहक शोरुम आएर होन्डाको दशैं तिहार अफर के छ भनेर सोध्छन् । तर हामीले आउँदै छ भनेर फर्काउनु परेको छ । अन्य प्रतिस्पर्धि ब्रान्डले अफरको प्रचार गरेर बाइक बिक्री गर्न थालिसकेका कारण छिट्टै अफर ल्याउन दबाब सिर्जना भएको छ ।’ यस्तोमा ढिलो गरे बिक्री प्रभाबित बन्नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
यद्यपि ढिलो आयो, कडा आयो भने झै होन्डाले अफर सार्वजनिक गरिसकेको छ । कम्पनीले नेपालमै पहिलो पटक ७ प्रदेशलाई समावेश गरेर हरेक प्रदेशबाट १ जनालाई १ लाख नगद प्रदान गर्ने अफर ल्याएको छ । होन्डाले यसका लागि ‘होन्डा ५ साथ ७, बम्परमा थप रु. १५ लाख’ राखेको छ । लक्की ड्रबाट विजेताको छनोट गरिने छ ।
कुनै पनि होन्डा मोटरसाइकल वा स्कुटर किन्ने ग्राहकले स्क्र्याच कुपनमा १ लाख रुपैयाँ सम्मको क्यासब्याक प्राप्त गर्न सक्ने छन् । त्यसैगरी स्पेयर पार्ट्समा ७ वर्षका लागि ७ प्रतिशत छुट प्रदान गरिने छ भने ७ वर्ष सम्म ९ वटा फ्रि सर्भिसिङ कुपन प्राप्त गर्न सकिने छ । होन्डाका बिग बाइकमा भने ३५ हजार रुपैयाँ सम्म क्यासब्याक प्राप्त गर्न सकिने छ । त्यसैगरी बम्पर पुरस्कारको रुपमा १५ लाख रुपैयाँ सम्म जित्न सकिने छ ।
यस्तो छ टीभीएस, बजाज, यामाहा, हिरो र सुजुकीले सार्वजनिक गरेको अफर
हालसम्म सार्बजनिक गरिएको स्किममध्ये टीभीएसको अफरमा ग्राहकहरु बढी आकर्षित देखिएका छन् । टीभीएसले ‘६ प्राइजको सरप्राइज’ नामक अफर सार्बजनिक गरेको छ । कम्पनीले मोटरसाइकल नकिन्दैदेखि किनेपछि, दैनिक, हरेक हप्ता, हरेक महिना र बम्पर प्राइज गरेर छ पटक उपहार जित्नसक्ने योजना ल्याएको हो ।
टीभीएसको यो योजना अन्तर्गत ग्राहकले बाइक किन्नु अघिनै बढीमा १ लाख रुपैयाँ सम्म जित्ने सक्ने र बिचको अन्य चरणमा समेत १० लाख रुपैयाँसम्म नगद, मोबाइल फोन, क्यासब्याक र हरेक महिना ७ लाख ८० हजार मूल्य पर्ने अपाचे आरआर ३१० मोटरसाइकल प्राप्त गर्न सक्नेछन् । त्यसैगरी बम्पर पुरस्कारको रुपमा अन्त्यमा एक जनालाई ३७ लाख ९९ हजार मूल्य पर्ने प्रोटोन सागा कार प्रदान गरिने छ ।
बजाजले ‘खुसीको ३ डोज’ नामक अफर ल्याएको छ । यस अन्तर्गत मोटरसाइकल किन्नु भन्दा पहिले नै यो स्किमका लागि रजिस्टर गरेर १० हजार रुपैयाँ सम्म छुट पाउन सकिने छ । यो रकम मोटरसाइकल खरिद गरे पछि भुक्तानी हुनेछ ।
दोस्रो डोज अन्तर्गत मोटरसाइकल किन्दा १ लाख रुपैयाँ सम्म छुट पाइने छ । अनि तेस्रो डोज अन्तर्गत मोटरसाइकल किने पछि प्रत्येक महिना एक जना ग्राहकले गोला प्रथामार्फत १० लाख रुपैयाँको बम्पर पुरस्कार पाउने छन् ।
त्यसैगरी अर्को चर्चित टु ह्विलर ब्रान्ड यामाहाले ‘रेस फर दि एस’ स्लोगन सहित फेस्टिवल अफर सार्बजनिक गरेको छ । सार्वजनिक भएको उक्त स्किम अन्तर्गत बम्परमा एकजना भाग्यशाली विजेताले १२ तोला सुन उपहार पाउनेछन् । फेस्टिभल सिजनमा यामाहा मोटरसाइकल तथा स्कुटर खरिद गर्ने ग्राहकले स्क्र्याचमार्फत न्यूनतम ८ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म स्योर सट छुट पाउनेछन् । त्यसैगरी लक्की ड्रमार्फत हरेक हप्ता एकजना भाग्यशाली विजेताले ४ तोला सुनको एक्का तास उपहारस्वरुप पाउने बताइएको छ । बम्परमा भने एकजना भाग्यशाली विजेताले ४ तोला तौल भएको तीनवटा एक्का तास अर्थात १२ तोला सुन उपहार पाउनेछन् ।
हिरोले ‘दशैंंको बेला हिरोको मेला’ भन्ने नयाँ योजना ल्याएको छ । यस योजना अन्तर्गत हिरो मोटरसाइकल तथा स्कुटर किन्ने ग्राहकले ६ हजार रुपैयाँ पक्का डिस्काउन्ट, स्क्रयाच कार्ड मार्फत १ लाख सम्म पाउन सक्ने र बम्पर लक्की ड्रमार्फत एक जनाले १ लाख नगद पाउने छन् । साथै सबै हिरो मोटरसाइकल र स्कुटरमा शून्य प्रतिशत ब्याजमा ५० प्रतिशत फाइनान्स सुविधा पनि उपलब्ध रहेको बताएको छ ।
सुजुकीले ‘दशै आयो उमंग छायो क्यासब्याक र बम्पर पायो’ नामक अफर ल्याएको छ । यस अन्तर्गतका सुजुकीका कुनै पनि बाइक र स्कुटर किन्दा १० हजार रुपैयाँ स्योर सट डिस्काउन्ट पाइने छ । त्यसैगरी १ वर्ष सम्म सडक दस्तुर छुट पाइने छ भने फोर्टनाइट बम्पर अन्तर्गत प्रत्येक १५ दिनमा एक जना विजेतालाई सुजुकी इन्ट्रयुडर बाइक उपहारको रुपमा प्रदान गरिने छ । फोर्टनाइट बम्परको विजेता हरेक दोस्रो हप्ता भीजी सुजुकी नेपालको अफिसियल फेसबुक पेजमार्फत लाइभ छनोट गरिने बताइएको छ ।
होन्डाले यस्तो नयाँ एड्भेन्चर बाइक ल्याउने, १९ अगस्तमा लन्च गर्ने सम्भावना
होन्डाले हालै नयाँ एड्भेन्चर बाइकको टिजर लन्च गरेको छ । होन्डाको सो बाइक...
दशैमा कुन बाइक किन्ने ? टीभीएस, यामाहा वा बजाज ? यस्ता छन् अफर
फेस्टिभल सिजनको सुरुवात भएसँगै अहिले विभिन्न कम्पनीहरुले धमाधम स्किम तथा...
आयो इको र पावर मोडमा चलाउन मिल्ने टीभीएस राइडर १२५, पल्सर र साइनसँग प्रतिस्पर्धा हुने
टीभीएसले भारतीय बजारमा १२५ सीसीको स्पोर्टी कम्युटर बाइक राइडर १२५ लन्च...